Ahoana ny fametrahana ny timer amin'ny Instagram | Androidsis
Ignacio Sala | 22/07/2021 16:00 | Fampiharana Android, Tutorials
Hatramin'ny nividianan'i Mark Zuckerberg Instagram, dia nitombo ny tamban-tserasera toy izany nanomboka natahotra izy ireo tao amin'ny FacebookSatria raha mitazona ny taham-pitomboany izy io, tsy ho ela dia hihoatra ny Facebook ny isan'ny mpampiasa azy.
Instagram Stories dia iray amin'ireo vokatra malaza indrindra, nefa tsy izany ihany. Ny iray amin'ireo manintona azy indrindra dia ny mety hametrahana fameram-potoana amin'ny publication, asa tena manintona izay ahafahanao mitazona ny sain'ny mpanaraka anao raha mampiasa azy tsara ianao. Raha te hahafantatra ny fomba ianao mametraha timer amin'ny Instagram, Manasa anao aho hamaky hatrany.
1 Inona ny famantaranandro Instagram
2 Ahoana ny fomba hanampiana ny mpamaky Instagram
2.1 Tsy misy afa-tsy amin'ny Tantara
2.2 Manampia timer amin'ny Instagram Stories
2.3 Inona ny endrik'ilay lahatsoratra amin'ny timer
2.4 Azoko atao ve ny manampy ny timer avy amin'ny solosaina?
3 Ahoana ny fomba handaminana ny famoahana hetsika amin'ny Instagram
3.1 Inona no azontsika atao amin'ny Hootsuite
3.2 Inona no azontsika atao amin'ny Creator Studio
Inona ny famantaranandro Instagram
Ny asan'ny timer amin'ny Instagram dia tsy tokony hafangaro amin'ireo fiasa hafa izay tsy miankina amin'ny tambajotra sosialy, ohatra, fandefasana sary amin'ny fandaharam-potoana na mampiasa fanisana isa hanaovana ny sary na horonan-tsary tianay havoaka amin'ny tambajotra sosialy.
Ny timer Instagram dia fiasa iray ahafahantsika manampy manisa isa an'ireo sary na horonan-tsary avoakanay amin'ny tambajotra sosialy, isa isa izay fanavaozana mavitrika ary mamela ny hitazomana ny mpanara-dia alohan'ny fanambarana hetsika manokana iray, hahatadidy toy ny hetsika tamin'ny fandaharam-potoana ...
Ity timer ity dia mety ho an'ny vondrona namana ary ireo olona malaza manana mpanaraka maro satria mamela anao hampahatsiahy azy ireo ny fotoana nialany mba hitsangatsangana, fankalazana fitsingerenan'ny andro nahaterahana, ny fotoana sisa hihaonana amin'ny sakafo hariva na hanatrehana hetsika na fankalazana fanambarana manokana.
Ahoana ny fomba hanampiana ny mpamaky Instagram
Tsy misy afa-tsy amin'ny Tantara
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatra momba ny mpamaky Instagram dia izany azo ampiasaina amin'ny Tantara ihany (Tantara). Tsy azo atao ny mampiasa ny timer amin'ny lahatsoratra mahazatra, satria ny fahasoavana an'io fiasa io dia manjavona tanteraka.
Tantaran'ny Instagram manana faharetana maharitra 24 ora, aorian'izay dia voafafa ho azy ireo fa tsy mamela soritra amin'ny tambajotra sosialy, na dia te-hitazona azy ireo aza isika dia afaka misintona azy ireo amin'ny alàlan'ny fampiharana samihafa.
Teboka manan-danja iray hafa izay tsy maintsy fantatsika alohan'ny hanombohana hampiasa io asa io dia ny Instagram, tsy manome afa-tsy endrika fanisana isa ho antsika izy, izany hoe tsy afaka mamolavola ny endrik'ity isika, noho izany dia mila manorim-ponenana amin'ilay nomeny antsika isika.
Azo inoana fa rehefa mandeha ny fotoana, raha mitohy malaza be io fampiasa io dia hisahirana miaraka amin'ny Instagram manampy modely fanisana isan-karazany, fa amin'izao fotoana izao dia tsy misy fampahalalana manondro an'io hevitra io.
Manampia timer amin'ny Instagram Stories
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika vantany vao ampidirintsika ny fampiharana dia tsindrio ny bokotra hamoahana.
Avy eo amin'ny farany ambany, tsy maintsy mifidy isika Anisan'ireo safidy samihafa aseho: Publication, History, Reels and Live, ny faharoa amin'izy ireo: Historia, satria raha tsy izany dia tsy hahita ny safidy hanampy timer isika.
Manaraka izany, raha vao nandrakitra ny horonantsary momba ny tantara izahay na nanampy ireo sary izay tianay ho anisan'ny tantara dia tsindrio ny kisary soloin'ny Tarehy mitsiky.
Tamin'izany fotoana izany, ny Firaisana apetaka azo ampiana ao amin'ny Instagram Stories. Ao anatin'io lisitra io dia ho hitanao ny famantaranandro.
Raha vantany vao nifidy ny timer isika tokony hataontsika:
Manampia anarana amin'ny timer
Apetraho rehefa tiantsika hifarana izany
Avelao ny olona handrehitra fampahatsiahivana ary hizara an'io isa io amin'ny tantaranao.
Raha vantany vao nampidirina ny famerenana, afaka manohy ny fanaontsika mahazatra isika rehefa tonga asio lahatsoratra, sary vaovao, horonan-tsary… Ary tsindrio ny bokotra famoahana.
Inona ny endrik'ilay lahatsoratra amin'ny timer
Ny tantara izay navoakanay tamin'ny fanisana fanisana dia ho azo jerena ho an'ny tsirairay amin'ireo olona manaraka antsika. Ireo olona ireo, isaky ny miditra amin'ny tantarantsika izy ireo, dia hahita ny counter mihemotra mihetsika, noho izany dia tsy haneho ny ora sisa tavela.
Raha ankoatr'izay dia navotsotra ny jiro ahafahan'ny olona mizara ny tantarantsika haseho amin'ny kaontin'ny mpanaraka azy avy. Azon'izy ireo atao koa ny manampy ny faran'ny fanisana amin'ny fampiharana fampahatsiahivana ampiasain'izy ireo, asa tsara indrindra ahafahan'ny mpanaraka mahafantatra ny hetsika resahina nefa tsy mila mahafantatra ny Instagram amin'ny fotoana rehetra.
Azoko atao ve ny manampy ny timer avy amin'ny solosaina?
Ny tambajotra sosialy Instagram dia tsy sahy namela ireo mpampiasa handefa amin'ny alàlan'ny lozisialy avy amin'ny solosaina, na izany aza, nandritra ny volana vitsivitsy. dia nanomboka nahafahana nanao izanyNa izany aza, ny fiasa mamela antsika hametraka isa amin'ny Instagram Stories dia tsy misy, farafaharatsiny amin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity (Jolay 2021).
Ahoana ny fomba handaminana ny famoahana hetsika amin'ny Instagram
Ny zavatra voalohany tsy tokony ho adino dia ny timer fotsiny amin'ny Instagram mamela ny haneho isa isa Izy io dia havaozina amin'ny fotoana tena izy, izany hoe isaky ny mahita azy ny mpampiasa dia kely kokoa ny fotoana sisa tavela rehefa manakaiky ny datin'ny hetsika.
Raha te-handahatra ny famoahana hetsika ianao dia tsy maintsy mampiasa fampiharana tsy maimaimpoana toa ny Hootsuite. Safidy iray hafa, maimaim-poana tanteraka dia Mpamorona Studio, fampiharana Facebook izay ahafahanao mamorona sy mandahatra lahatsoratra avy amin'ny solosaina.
Ny fomba tokana handrafetana tantara iray izay misy isa isa amin'ny alàlan'ny Hootsuite ihany no misy. Mampalahelo fa tsy misy io safidy io amin'ny alàlan'ny fampiharana Mpamorona Studio an'ny Facebook, na dia tsy misy dikany aza izany.
Inona no azontsika atao amin'ny Hootsuite
Alaharo ny sary sy sary.
Fandaharam-potoana Lahatsoratra lahatsoratra.
Fandaharana Carousel Publishing
Inona no azontsika atao amin'ny Creator Studio
Fandefasana fandaharana ao amin'ny IGTV
Tsy fantatsika ny antony tsy avelan'ny Creator Studio handamina ny famoahana ny tantara, fa araka ny nolazaiko etsy ambony Misalasala aho fa misy fetra avy amin'ny orinasa mihitsy satria nanolotra an'io fahafaha-manao io tamin'ny alàlan'ny Hootsuite izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba hametrahana ilay fameram-potoana amin'ny Instagram